အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ကျရောက်နေပြီ Martech Zone
"ChangeThis: Issue 46" ၏အစားဘာသာရပ်လိုင်းသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စာဖတ်နေတုန်းမှာခြုံစရာမလိုအောင်လိုင်းပြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ် (ဖတ်လို့မရဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး) ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်ချင်သောသူများကိုစာပို့ရန် Multi-part MIME အီးမေးလ်များဖြစ်နိုင်ပြီး HTML ကိုကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအီးမေးလ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ် ဦး ဆွဲဆောင်မှုနိဒါန်း?
ဖြစ်ကောင်းအခြားတစ် ဦး အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ အသုံးပြုရန်ခက်ခဲလျှင်
ဒီမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီသီချင်း'byline သည်
ChangeThis သည်မီဒီယာအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေသည်။ စိတ်ကူးများဖန်တီးပုံနှင့်ပြန့်နှံ့ပုံကိုစိန်ခေါ်ရန်အတွက်လက်ရှိ PDF များ၊ ဘလော့များနှင့်ဝဘ်ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုသုံးသောမီဒီယာပုံစံ။
ခေါင်းဆောင်များနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်ရန်ပစ္စည်းမြောက်မြားစွာရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုသူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လာစေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသူတို့လျစ်လျူရှုဖို့သူတို့ရွေးချယ်တာကအရမ်းဆိုးတာပဲ။
5 / 8 / 2008: ငါမှာယူပြီးသော်လည်းယနေ့ငါဒီအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသေချာမသိပေမယ့်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ
Tags: bulleted စာရင်းethဘုံလင့်များအီးမေးလ်ကအီးမေးလ် format နဲ့ခေါင်းစဉ်နိဒါန်းလိုင်းကျိုးသည်လင့်များMIMEဘက်စုံသုံး Mimeသတင်းလွှာဘာသာရပ်လိုင်းနေရာလွတ်
Cisco I-Prize Finals!
ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သောဤအစီအစဉ်ကို download လုပ်ပါ။
မေလ 8, 2008 မှာ 9: 17 AM
ဦးခေါင်းကို ညာဘက်ထိမှန်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပို့စ်နဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းများ
မေလ 8, 2008 မှာ 10: 30 AM
မေလ 9, 2008 မှာ 10: 17 pm တွင်
ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးမှာ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ “Issue46” ကို ဘာသာရပ်စာကြောင်းတွင် ကာကွယ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဘာသာရပ်လိုင်းတစ်ခုစီတွင် နံပါတ်တစ်ခုစီရှိသည့်အခါဖြစ်သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်တွင် သိမ်းဆည်းထားသော အီးမေးလ်များကို စုစည်းနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်" ဟု တယောက်ပြောသည်ကို ကျွန်ုပ်ကြားလိုက်ရသည်။
မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဖွင့်နှင့် ကလစ်နှိပ်သည့်နှုန်းထားများကို မည်သို့ရနိုင်သည်ကို ပြောပြရန် ကျွန်ုပ်အား ကြီးမားသော အခကြေးငွေများပေး၍ ပေးချေသော်လည်း ဘာသာရပ်လိုင်းကို လိုက်မမှီလိုပါ။ အဲဒီ ကိန်းဂဏန်းတွေ ကံကောင်းပါစေ....